Archive du 20200219
Lohamasinina nampanantenain-dRajoelina Mihemotra fanintelony ny fahatongavany
Nambara fa mialoha ny faran’ny taona 2019 no ho tonga ny lohamasinina roa ho an’ny zotra FCE.
Ny Rado Rafalimanana Nahazo fahafahana vonjimaika
Tonga namaly ny antson’ny Fampanoavana amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Anosy i Ny Rado Rafalimanana, filohan'ny ONG Fanahy no Maha Olona,
Jeneraly Ramakavelo Désiré Nanao famelabelaran-kevitra tany am-ponja
Notontosaina omaly teny amin'ny fonjaben'Antanimora ny famelabelaran-kevitra narahina adihevitra, notarihin'ny Jeneraly Ramakavelo Désiré ;
Fihantsian’i Emmanuel Macron “Tokony hampiantso ny ambasadaoro frantsay ny mpitondra Malagasy.”
Fihantsiana na “incident diplomatique” no nataon’ny filoham-pirenena frantsay, Emmanuel Macron, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Otrikafo,
Hentitra ny ben’ny tanàna Tsy maintsy diovina Antananarivo
Miantso ireo manan-trano sy mpanofa rehetra eo amin’ny « avenue de l’indépendance » hanavao ny lokon’ny tranony.
Fitondrana IEM Raha seho ivelany aloha dia talentany
Tena tsara ary mety ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanomezana endrika tsara maha te honina.
Faritra Atsinanana sy Analanjirofo Miandrandra governora mahafantatra ny faritra ny mponina
Resabe ao amin’ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo amin’izao ny fanendrena izay ho governoran’iny faritra iny, raha ny nambaran’ireo mpanara-baovao monina any an-toerana.
Mpiasan’ny CNAPMAD Hatramin’izao tsy azo ny karama janoary
Mitaraina ho tsy mbola nahazo karama volana janoary ny mpiasa amin’izao fotoana. « Very fanahy mbola velona izahay mpiasa ato amin’ny CNAPMAD (Centre National de Production de Matériel Didactique),
Coupe Arabe U 20 2020 I Bahrein indray no hihaona amin’ny Barea U 20
Ny ekipam-pirenen’i Bahrein U 20 indray no hihaona manaraka amin’ny Barea tanora Malagasy ao amin’ny vondrona B misy azy, any amin’ny fifaninanana fiadiana ny “Coupe Arabe U 20 2020”
Volley-ball - Championnat des Clubs de la Cavb Zône 7
Miditra amin’ny andro faha-5 ny fifanintsanana anio Efa miditra amin’ny andro faha-5 farany amin’ny
Ligim-paritry ny baolina kitra Atsinanana Tompondaka 2020 ny As Fortior Toamasina
Voahosotra ho tompondaka rejioanalin’ny baolina kitra Diviziona voalohany any amin’ny ligin’ny baolina kitra
Fahazoan-dalana ara-tontolo iainana hosoka “Ho hentitra ny fanaraha-maso”, hoy ny ONE
Miisa 906 ireo fahazoan-dalana ara-tontolo iainana nomen`ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana (ONE)
Hain-tany mahatsiravina 100 Ariary ny rano iray zinga any Androy
Rano iray zinga na lovia tsatokaty vidiana 100Ar any Androy, raha 2000Ar ny 20 litatra.
Ankizy voan’ny homamiadana 100 isan-taona ireo manatona ny hopitaly HJRA
Tena mahazo vahana be ny homamiadana mpahazo ny zaza eto amintsika ankoatra ny homamiadana mpahazo ny vehivavy.
Sarimihetsika Malagasy « Mahavelona raha tsy atao kitoatoa »
Ny taona 2000 no nanomboka niditra tao anatin’ny tontolon’ny sarimihetsika malagasy i Lala Raharimalala. Andrakandrana, raha ny fanazavany,
ANALAKELY Trano 78 isa no tokony hanavao ny lokony
Isaky ny dimy taona no tokony hanavaozana sy hatsarana ny lokon’ireo manodidina an’Analakely, araka ny lalàna.
Fahasalamam-bahoaka Misy trangana pesta ao Antanifotsy
Ao anatin’ny fotoam-pahavaratra tanteraka isika amin’izao. Fotoana mahabe ny valan’aretina isan-karazany ary anisan’izany ny « Pesta ».
Mahanoro Nitondra fanampiana ny minisitry ny mponina
Taorian’ny dian’ny praiminisitra nampahery ireo traboina sy nijery ny fahavoazana,
Arivonimamo Nidoboka am-ponja ilay rangahy nanolana zaza 6 taona
Rangahy iray no vaosambotry ny polisy ao Arivonimamo ny alatsinainy teo noho ny resaka fihetsika mamoafady (attentat à la pudeur)